I-Einstein: I-AI Solution ye-Salesforce Ingakusiza Kanjani Ukuthengisa Nokusebenza Kokuthengisa | Martech Zone
I-Einstein: I-AI Solution ye-Salesforce Ingakusiza Kanjani Ukusebenza Kwezentengiso Nokuthengisa
NgoMsombuluko, Ephreli 13, 2020 NgoMsombuluko, Ephreli 13, 2020 Douglas Karr
Iminyango yezokumaketha ivame ukuba nabasebenzi abancane futhi basebenze ngokweqile - isikhathi esilinganiselayo sokuhambisa idatha phakathi kwezinhlelo, ukukhomba amathuba, nokufaka okuqukethwe nemikhankaso yokwandisa ukuqwashisa, ukuzibandakanya, ukutholwa, nokugcinwa. Ngezinye izikhathi, noma kunjalo, ngibona izinkampani zilwela ukugcina lapho kunezixazululo zangempela lapho ezinganciphisa izinsiza ezidingekayo ukukhulisa ukusebenza okuphelele.
Ubuhlakani bokufakelwa bungobunye balabo buchwepheshe - futhi sekuvele kufakazela ukuthi kunikeza inani langempela kubakhangisi njengoba sikhuluma. Uhlaka ngalunye lwezentengiso olukhulu lunenjini yalo ye-AI. Ngokubusa kukaSalesforce embonini, amaklayenti we-Salesforce kanye ne-Marketing Cloud adinga ukubheka Einstein, Ipulatifomu ye-AI ye-Salesforce. Ngenkathi izinjini eziningi ze-AI zidinga intuthuko enkulu, iSalesforce Einstein yathuthukiswa ukuthi isetshenziswe ngezinhlelo ezincane nokuhlanganiswa kuyo yonke indawo yokuthengisa ye-Salesforce kanye nesitaki sokumaketha… noma ngabe yi-B2C noma i-B2B.
Isizathu esiyinhloko esenza i-AI igqame kakhulu ekuthengiseni nasekukhangiseni ukuthi, uma isetshenziswe kahle, isusa ubandlululo lwangaphakathi lwamaqembu ethu okuthengisa. Abathengisi bavame ukwenza ngokukhethekile futhi bahambe lapho bakhululeke khona kakhulu uma kukhulunywa ngamasu wokubeka uphawu, wokuxhumana, kanye nokwenza. Sivame ukuhlanganisa idatha ukusekela umbono wokuthi sizethemba kakhulu.
Isithembiso se-AI ukuthi sihlinzeka ngombono ongachemile, ngokususelwa eqinisweni, futhi oqhubeka nokwenza ngcono ngokuhamba kwesikhathi njengoba kwethulwa idatha entsha. Ngenkathi ngithemba amathumbu ami, ngihlala ngihlatshwa umxhwele ngokuthola okutholwa yi-AI! Ekugcineni, ngikholwa ukuthi kukhulula isikhathi sami, kungivumela ukuthi ngigxile ezixazululweni zokudala ngenzuzo yemininingwane etholakele nokutholakele.
Uyini uSalesforce Einstein?
U-Einstein angasiza izinkampani zenze izinqumo ngokushesha, zenze abasebenzi bakhiqize kakhudlwana, futhi zenze amakhasimende ajabule ngokusebenzisa ubuhlakani bokuzenzela (AI) kuyo yonke i-Salesforce Customer 360 Platform. Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi sidinga ukuhlela okuncane futhi sisebenzisa ukufundwa komshini ukuthatha idatha yomlando ukubikezela noma ukwandisa imizamo yokuthengisa neyokuthengisa yesikhathi esizayo.
Kunezindlela eziningana zokusebenzisa ubuhlakani bokufakelwa, nazi izinzuzo ezisemqoka nezici zeSalesforce Einstein:
ISalesforce Einstein: Ukufunda Komshini
Thola ukuqagela okuningi mayelana nebhizinisi lakho namakhasimende.
Ukutholwa kwe-Einstein - Thuthukisa umkhiqizo futhi uthole amaphethini afanele kuyo yonke idatha yakho, noma ngabe ihlala eSalesforce noma ngaphandle. Thola ukuqonda okulula kwe-AI nezincomo ezinkingeni ezinzima. Ngemuva kwalokho, thatha isinyathelo ngokutholakele kwakho ungakaze ushiye iSalesforce.
Umakhi Wokubikezela ka-Einstein - Bikezela imiphumela yebhizinisi, efana ne-churn noma inani lempilo yonke. Dala amamodeli we-AI wangokwezifiso kunoma iyiphi inkambu ye-Salesforce noma into ngokuchofoza, hhayi ikhodi.
Isenzo Esihle Esilandelwayo se-Einstein - Diliva izincomo ezifakazelwe kubasebenzi nakumakhasimende, ngqo kuzinhlelo zokusebenza lapho basebenza khona. Chaza izincomo, dala amasu esenzo, wakhe amamodeli wokuqagela, ubonise izincomo, futhi wenze kusebenze okuzenzakalelayo.
I-Salesforce Einstein: Ukucubungula Ulimi Lwemvelo
Sebenzisa i-NLP ukuthola amaphethini olimi ongawasebenzisa ukuphendula imibuzo, uphendule izicelo, futhi ubone izingxoxo mayelana nomkhiqizo wakho kuwebhu yonkana.
Ulimi lwe-Einstein - Qonda ukuthi amakhasimende azizwa kanjani, imibuzo yomzila ozenzekelayo, futhi wenze lula ukuhamba komsebenzi wakho. Yakha ukucubungula kolimi lwemvelo kuzinhlelo zakho zokusebenza ukuhlukanisa izinhloso nomuzwa emzimbeni wombhalo, noma ngabe luphi ulimi.
Einstein Bots - Yakha kalula, uqeqeshe, uphinde usebenzise ama-bots wangokwezifiso eziteshini zedijithali ezixhunywe kudatha yakho ye-CRM. Thuthukisa izinqubo zebhizinisi, nika amandla abasebenzi bakho, futhi ujabulise amakhasimende akho.
ISalesforce Einstein: Ikhompyutha Vision
Umbono wekhompyutha ufaka ukuhlonza iphethini ebonakalayo nokulungiswa kwedatha ukulandelela imikhiqizo yakho nomkhiqizo, ukubona umbhalo ezithombeni, nokuningi.
Umbono ka-Einstein - Bona yonke ingxoxo ngomkhiqizo wakho ezinkundleni zokuxhumana nangaphezulu. Sebenzisa ukuqashelwa kwesithombe okuhlakaniphile kuzinhlelo zakho zokusebenza ngokuqeqesha amamodeli wokufunda okujulile ukuze ubone umkhiqizo wakho, imikhiqizo, nokuningi.
ISalesforce Einstein: Ukuqashelwa Kwezinkulumo Ngokuzenzakalelayo
Ukuqashelwa kwenkulumo okuzenzakalelayo kuhumusha ulimi olukhulunywayo lube umbhalo. Futhi u-Einstein uthatha igxathu eliya phambili, ngokubeka lowo mbhalo kumongo webhizinisi lakho.
Izwi lika-Einstein - Thola izifingqo zansuku zonke, wenze izibuyekezo, bese ushayela amadeshibhodi ngokumane ukhulume no-Einstein Voice Assistant. Futhi, dala futhi uqalise owakho umkhuba, abasizi bezwi abanophawu nge-Einstein Voice Bots.
Vakashela indawo yakwaSalesforce yakwa-Einstein ukuthola eminye imininingwane ngomkhiqizo, ubuhlakani bokufakelwa, ucwaningo lwe-AI, Izimo Zokusebenzisa kanye nemibuzo ebuzwa njalo.
Qiniseka ukuthi uthinta i- Ukubonisana nabasebenzi beSalesforce, Highbridge, futhi singakusiza ekuthumeleni nasekuhlanganiseni noma iyiphi yalezi zindlela.
Tags: ukuhlakanipha okungekhona okwangempelaumbono wekhompyuthaeinsteineinstein nlpumbono ka-einsteinizwi einsteinukuhlaziywa kwesithombeukucutshungulwa kwezilimi zemvelosalesforceISalesforce Einsteinizibikezelo ze-salesforce einsteinizibikezelo zabasebenziyini i-salesforce einstein
Qala Ukumaketha Okuzenzakalelayo kwenkambo yakho eku-inthanethi ukuze uzuze ukuthengisa okuningi kwe-B2B
I-squarespace: Ngakhe iwebhusayithi ye-Spa enesitolo esiku-inthanethi nokuqokwa ngosuku olulodwa